Print history | Indigenous Knowledge
Archive for the ‘Print history’ Category
बाचाहरू कसले बढी तोड्ला भनेर गम्दा राजनीतिक दलहरूतिरै धेरैका औंला सोझिन्छन्। त्यसमा पनि चुनावका बेला दलहरूले गर्ने बाचा, पत्याउने कुरै आएन। २०१५ सालको आम निर्वाचनमा ‘नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्’ले यस्तै बाचा गरेको एउटा पर्चा प्राप्त भएको छ। जसले, त्यस बेलाको नेपालको अवस्था, जनताको आवश्यकता र राजनीतिक दलहरूको मनस्थितिलगायत धेरै विषय उजागर गर्छ।
हातले निकै राम्रो अक्षरमा लेखिएको गोर्खा परिषद्को त्यो पर्चामा चुनाव जितेमा पाँच वर्षमा दुईसय अस्पताल, दुई हजार पुल र दुई–तीन हजार स्कूल बनाउने बाचा गरिएको छ। त्यो चुनावमा १९ सीट जितेर दोस्रो स्थानमा रहेकोले गोर्खा परिषद्ले बाचा पूरा गर्नै परेन। जुन चुनावमा नेपाली कांग्रेस दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर पहिलो बनेको थियो। (more…)
Articles, Historical Documents, History, Media, Nepal, Nepali Congress, Print history, Research
संयोगान्त नाटकको चाहना
दक्षिण एशियामा प्रदर्शन हुने फिल्म वा नाटक संयोगान्त देख्न चाहने मानसिकता निकै पुरानो रहेको एक–डेढ सय वर्षअघि अनूदित र मञ्चित विदेशी नाटकहरूले पुष्टि गर्दछन्।
नेपाली नाट्य परम्पराको चर्चा गर्दा पलमानसिंह स्वाँर, धनविर मुखिया र बालकृष्ण समलाई बिर्सन मिल्दैन। तर स्थानीयस्तरमा यो परम्पराको सुरुआत उहाँहरू भन्दा पहिलेदेखि नै प्रचलित नाट्य मञ्चन र राजा–महाराजाका लागि तयार गरिएका धार्मिक तथा ऐतिहासिक कथामा आधारित नाटकहरूबाट भइसकेको थियो।
नाट्य परम्परालाई निरन्तरता दिने क्रममा नेपालमा विदेशी भाषामा लेखिएका प्रचलित नाटकको अनुवाद र प्रदर्शन पनि भयो। नेपाली नाट्य क्षेत्रमा वि.सं. १९६० को दशकमै खासगरी भारतका विभिन्न भाषामा अनुवाद भई प्रदर्शनमा आएका शेक्सपियरका नाटकहरू देखा पर्न थालिसकेका थिए। अठारौं शताब्दीको शुरूतिर अंग्रेजहरूले मात्र अनुवाद गर्ने गरेका यस्ता नाटकहरू पछि स्थानीय व्यक्तिहरूले पनि गर्न थालेका थिए।
शुरूमा ती नाटकहरूको अनुवाद पठन–पाठनका लागि मात्र हुन्थ्यो, मञ्चनका लागि हुँदैनथ्यो। शेक्सपियरका केही नाटकको १८औं शताब्दीमै उर्दू भाषामा अनुवाद भए पनि स्टेजमा मञ्चन हुन केही समय लाग्यो। नेपाली भाषामा यस्ता नाटकहरू मूल कृतिबाट सीधै अनुवाद भएका थिए वा थिएनन् भन्न कठिन छ, तर वि.सं. १९७४ मा गरिएको शेक्सपियरको किङ्लियर (वि.सं. १६६२) को नेपाली अनुवाद भने उर्दूबाट भएको देखिन्छ। मदन पुरस्कार पुस्तकालय (मपुपु) मा संकलित एउटा पर्चाको शीर्षक शेक्सपियरको उक्त कृतिसँग मिले पनि त्यसमा शेक्सपियरका सम्बन्धमा वा अनुवादका विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। (more…)
Articles, Historical Documents, History, India, Literature, mass media, Media, Nepal, Print history, Research